DEG-DEG: Xiddig Ka Tirsanaa PSG Oo Geeriyooday & Waxa Laga Ogyahay Sababta Dhimashadiisa | Laacibnet.net
DEG-DEG: Xiddig Ka Tirsanaa PSG Oo Geeriyooday & Waxa Laga Ogyahay Sababta Dhimashadiisa
Dunida kubadda cagta ayaa waxa usoo yeedhay war murugo leh oo cid walba ka naxday, kaas oo lagu shaaciyey inuu geeriyooday da’yar Faraniis ah oo usoo ciyaaray kooxda haysata horyaalka Ligue 1 ee Paris Saint-Germain.
Jordan Diakiese oo ay da’diisu ahayd 24 jir ayaa u geeriyooday sabab aan illaa hadda la garanaynin, waxaana baraha bulshada qabsatay baroor-diiqda iyo tacsida qoyska iyo ehelka laacibkan loo dirayo.
Ciyaartoygan oo hadda ka tirsanaa kooxda AS Furiani Agliani ee horyaalka heerka hoose ee Faransiiska ayaa dhimashadiisa la xaqiijiyey, waxaana war-saxaafadeed ay kooxdu soo saartayy ay ku sheegtay inay aad uga tiiraanyoonayso geerida naxdinta leh ee ku timid Jordan Diakiese.
Kooxdu waxa kale oo ay sheegtay in 24 jirkan oo kusoo biiray bishii July ee sannadkii hore uu ahaa ciyaartoy farxad badan oo mar walba dhoola-caddayn jiray.
War-saxaafadeedka warka tiiraanyada leh siday, waxa kale oo ay kooxda reer France ku xustay in shaqaalaheeda iyo ciyaartoygeeda ay si xun u saamaysay geeridan naxdinta leh, waxaanay tacsi u dirtay qoyska uu ka baxay.
Ma jiro war faahfaahsan oo ku saabsan sababta uu u dhintay Diakiese iyo waxa sababayba, laakiin warbaahinta Faransiiska ayaa waxay sheegayaan in ay rumaysan yihiin inuu gellinkii dambe ee Khamiistii shalay uu ku geeriyooday magaalada Paris ee caasimadda Faransiiska.
Warbaahintu waxa kale oo ay xustay in haba-yaraatee illaa hadda aan war buuxa laga haynin waxa keenay dhimashada, laakiin la sugayo inay boolisku faahfaahin ka bixiyaan.
Kooxaha Faraniiska, ciyaartooyo iyo shaqsiyaad caan ahayaa tacsida la wadaagay qoyska Jordan Diakiese, waxaana ka mid ah naadigiisii hore ee PSG oo uu kasoo baxay kulliyaddeeda haryarka oo uu ku biiray sannadkii 2012.
PSG ayaa waxay fasaxday Jordan Diakiese sannadkii 2015 oo uu qaab bilaash ah kaga baxay, waxaanu ku biiray Chaux-de-Fonds isaga oo usii dhaafay NK Ruder iyo AS Furiani oo uu hadda joogay.
Difaacan 24 jirka ah ayaa waxa uu u ciyaaray xulka qaranka Faraniiska ee ay da’doodu ka hoosayso 20 jirrada.